A tuola Umar Farouk Abdulmutallab nga mkpuru oka - Igbo News | News in Igbo Language
A tuola Umar Farouk Abdulmutallab nga mkpuru oka
Jun 30, 2014 - 23:00 Updated: Jan 19, 2021 - 23:01
Otu onye ọkaikpe na mba Amerịka atụọla nwa afọ ala Nigeria nga mkpụrụ. Dịka a na-ewere otu ogbe ọka na-atụpụ nanị otu mkpụrụ ọka nay a kwa afọ, nga mkpụrụ ọka bụ nga ebighi ebi, nke onye a tụrụ ya ga-anọgide n’ime ya were ruo n’ụbọchị ọnwụ ya.
Gịnị kpatara e jiri tụọ ya ụdị nga a? Umar kwetere na ikpe mara ya n’ebubo ahụ eboro ya na ọ kpara nkata ma nwakwaa ike ya ịtụ ogbunigwe n’ụgbọelu bu ndị njem aga Amerịka.
N’ụbọchị ekeresimesi, abalị 25 nke ọnwa disemba, afọ 2009, Umar kwara mgbọ ogbunigwe yiri ya n’iba ya, were banye n’ụgbọelu na-aga Amerika. A na-akọwa na ndị otu Al-Kaịda koro Umar. O kwenyere ha were nyiri ogbunigwe n’iba ya were banye n’ugboelu bu ihe ruru mmadụ 300 si Amsterdam aga Detroit. Mgbe ha ruteweziri n’ebe ụgbọelu ha ga-ada n’Amerịka. Umar nwara ike ya ime ka obugbigwe ya gbawaa, ma gbuo ma ya ma ndị ọzọ so eme njem n’ụgbọelu ahụ. Mana aka apụghị ya.
Ndị njem ibe ya jisiri ike jikpaa Umar ahụ, were meghụọ ogbunigwe ahụ nke Umar munyegoro ọkụ.
E mechara kpee Umar ikpe n’Amerika. Umar jiri ọnụ yak were na ikpe mara ya.